‘Isithangami nohlelo lwe-TV kuziqondanele’
SIQONDANE kahle nokuthi banohlelo lwethelevishini olukhuluma ngemishado isithangami semishado sikaMo & Phindi esizoba ngoMgqibelo Isithombe: FACEBOOK
KUZENZEKELE ukuthi isithangami semishado esizoba seThekwini ngoMgqibelo siqondane nokuthi abahleli baso sebenohlelo lwethelevishini.
UMnuz Monwabisi Grootboom nomkakhe, uNkk Phindile Grootboom, abadume ngelikaMo & Phindi ohlelweni iFor Better for Worse kuMzansi Magic, bazokwenza isithangami ngoMgqibelo e-The Globe, eSuncoast Casino, eThekwini.
UGrootboom uthe i-The Marriage Dance kwakumele ibe ngoFebhuwari ngonyaka odlule kodwa kwaphazamiseka izinhlelo. Nakuba kuziqondanele ukuthi yenziwe ngesikhathi sebenohlelo lwethevishini, uthe kodwa kuqondane kahle.
“Kuyiqiniso ukuthi umuntu ufunda aze afe. Nathi ngeke sithi sesazi konke ngomshado. Kusivule amehlo ukukhuluma nabantu abashadile ngabadlule kukona emishadweni yabo. Lokhu kuzosisiza nasesithangami esisihlelayo ngoba sesifunde nokunye okuningi,” echaza.
Enaba ngokuzobe kwenzeka esithangamini, uthe bazobe bezibambele mathupha.
“Kuyaziwa ukuthi ezithangamini zemishado kuyakhulunywa kuphela kodwa sifuna ukuthasisela nokwehlukile ngomdanso. Sifuna ukufaka umdanso ukuze sijabulise izethameli. Umdanso yiwona futhi ozoveza kahle lokhu esizobe sikhuluma ngakho ngomshado,” kusho uGrootboom.
Mayelana nohlelo lwabo lwethelevishini, uthe konke kuhamba kahle ngendlela abebengayilindele. Sekuyacaca ukuthi luyimpumelelo uhlelo yize lusaqhubeka.
Uthe sekuqinisekisiwe ukuthi kuzobuya isizini yesibili yohlelo, angashongo ukuthi izoqala nini. Zikhona ezinye izinhlelo zethelevishini eziphathelene nokwakha umndeni abaphezu kwazo.
“Asifuni ukuthi isithangami kube sengathi simayelana nathi kuphela. Sizokhuluma ngempilo yethu ngoba nathi sesidlule kokuningi. Sikholelwa ezindabeni zangempela, hhayi kube sengathi konke kuhamba kahle emshadweni. Nokho esithangamini sifuna umongo kube wumshado, nabanye bakwazi ukucobelela abanye abashadile ngempilo yabo.”
Isithangami sizoba ngo-7 ntambama. Amathikithi asekhona kuma-computicket ngoR200 umuntu emunye.